Nagu saabsan - Zhejiang Leadrive Electric Motor Co., Ltd.
IE1 Saddex waji oo asynchronous ah
IE2 Saddex waji matoor asynchronous
IE3 Saddex waji matoor asynchronous
MS Aluminium qolof saddex waji asynchronous
Ruush Heerka Ruushka (Aasaasiga Awoodda Sare)
Mashiinka asynchronous ee saddex-waji ah ee soo-dejiyaha qalabka
Mashiinka asynchronous ee saddex-waji ah ee bamka tuubada
Mashiinka asynchronous saddex-waji ah oo loogu talagalay mashiinnada dhagxaanta iyo mashiinnada alwaaxa
Mashiinka asynchronous saddex-waji biyo-qaboojiyey
YB3 Mashiinka seddex wajiilaha oo aan olol lahayn
YD2 Marxalado Kala Duwan Oo Xawaare Ah Oo Seddex Waji Ah Asynchronous Motor
YEJ2 Electromagnetic Braking Saddex-Waji Motor Asynchronous
YVP xawaaraha soo noqnoqda xawaaraha sedexda waji ee asynchronous
YXP Mashiinka seddex-waji asynchronous ee dagaalka dabka heerkulka sare iyo qiiqa qiiqa
Qaboojinta Tower Motor
Iimaan la'aanta shirkadaha waxay la mid tahay rumaysad la'aanta aadanaha. Way adagtahay in gaaro ujeeddo weyn oo lagu gaaro guul waarta. Hadday tahay Warshadaha ganacsiga istiraatiijiyad ama dib-u-habeyn urur, ku dhowaad dhammaan isbeddellada waxay ku tiirsan yihiin guud, caqiido cad iyo nidaam dhaqan. Xaqiiqdii, aasaasida ama beddelka aaminsanaanta shirkadaha waxaa bilaabay ganacsato ku saleysan baahiyaha isbadal istiraatiijiyadeed iyo adeeg
sidii isbadal istiraatiiji ah.
Halkan, waxaad ka arki kartaa waxqabadka kobacayaga oo aad wax ka baran kartaa horumaraheenna ugu dambeeyay. Waxaan sidoo kale diyaar u nahay inaan kula wadaagno Ku raaxayso khibrada cajiibka ah ee sii kordheysa wada-hawlgalayaashayada adduunka oo dhan. Dabcan, waad arki kartaa masuuliyadeena iyo masuuliyad. Raadinta ganacsiga iyo shaqaalaha si ay u wada koraan isla waqtigaas, waxaan had iyo jeer u hoggaansamaanaa wadada horumarka waara oo si firfircoon u qaadnaa bulshada mas'uuliyadda, daryeelka bulshada ee xamaasadda leh, soo celinta bulshada.
Halkan, waxaad sidoo kale ka arki kartaa himiladeenna. Waxaan si taxaddar la'aan ah u raad raacnaa "laba dhaqaale, saddex cusub, shan, tillion "Ujeeddooyinka Istiraatiijiga ah, ee ma aha oo kaliya in lagu dadaalo sidii loo gaari lahaa isbeddel joogto ah iyo kor u qaadista dhaqaalaha Shiinaha ee caadiga cusub, laakiin sidoo kale in la wadaago fursadaha iyaga iyo dhigooda caalamiga ah, Horumar wadajir.
Qiimaha wuxuu ka yimaadaa abuurista! Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad mustaqbalka si wadajir ah u abuurto!
Focus on horumarinta nabdoonaanta & jawiga saaxiibtinimo bamka & nidaamka iyo in la abuuro qiimo dhammaan daneeyayaasha.
Sare u qaad sawirka mashiinka Shiinaha & nidaamka nidaamka, adigoo ah shirkad horumarineed oo waarta oo hormar ku leh warshadan.
Leadrive Qiimaha Muhiimka ah
Ganacsi kula socod VIRTUE, Ku dadaal guusha la QAADASHADA, Guul ku gaadho waxtarnimo, U dhaqaaq ficillada saxda ah.
Raad Lead Lead
Sawir libaax leh dabeecad xamaasad, deeqsinimo, yididiilo iyo himilo ayaa loo abuuray sidii mascot ku saleysan tixraaca zodiac ee Leadrive.
Shirkadda Zhejiang Leadrive Electric Motor Co., Ltd. Waxay ku taalaa Taizhou-waa sariir firfircoon magaalada dhaqaalaha gaarka loo leeyahay ee gobolka Zhejiang, kuna tiirsan dhaqaalaha weyn goobada Yangtze River Delta, Zhejiang Leadrive Electric Motor Co., Ltd. (halkan ka dib loo yaqaan "tripow motor") wuxuu leeyahay jawi juqraafi ahaan ka sareeya .Garoonka diyaaradaha ee Huangyan iyada oo u jirta 2 kiiloomitir iyo dekedda Haimen oo 10 kiiloomitir u jirta shirkadda waxay ku raaxeysataa soo-dejinta habboon-biyo-hawo-ku-soo-dejinta koox, nidaam maareyn casriyeysan, shaqaale tayo sare leh, wax soo saar dhameystiran tas-hiilaadka, qalabka baaritaanka oo dhameystiran, xoog farsamo awood leh, wax soo saar la isku halleyn karo tayada, habka wax soo saar wanaagsan, nidaam tayo fiican leh, R & D horumarsan awoodda iyo kooxda iibinta xirfadeed, Leadrive MOTOR wuxuu noqday xiddig soo kordheysa ee warshadaha gawaarida ee Shiinaha. Shabakada iibkeedu wuxuu ku faafay ilaa 20 gobol iyo magaalooyinka dalka oo dhan. Summaddeeda sumcadeed ayaa lagu riyaaqay qof walba wuxuu noqday xulashada ilaaliyeyaasha wuxuuna ku guuleystay sumcad wanaagsan ka mid ah dadka isticmaala.
Mashiinka Leadrive wuxuu ku takhasusay soo saarista, cilmi baarista iyo iibinta noocyo kala duwan ee matoorrada. Wax soo saarkiisa waxaa ka mid ah taxane kala duwan oo 3-ph matoorro asynchronous ah suchas Y, YE2, YE3, YD, YEJ, YVP iyo matoorro kale oo gaar ah oo laga soo dheegtay. Qaadashada sandallad isku mid ah iyo heerarka korantada iyo cabirka sii kordhaya ee istaandarada IEC, alaabooyinkoodu waxay leeyihiin faa'iidooyinka ay ka mid yihiin waxtarka sare, Xuddunta bilowga ah, heerka dhawaaqa gariirka oo hooseeya, iyo kalsooni sare. Alaabooyinka ayaa loo qiimeeyay inay u hoggaansamaan CE CONFORMITY ee EU waddammada iyo in laga helay CCC iyo CQC. Shirkaddu waxay ku guuleysatay isgaarsiinta IS09001 nidaamka waafaqsanaanta tayada. Mashiinka Leadrive wuxuu isku xilqaamayaa xalalka lafilayo ee lafilayo Isticmaalayaasha ku shaqeeya dalabka warshadaha iyo korontada iyaga oo u qaabeeya astaan ​​gaar ah oo loo habeeyay matoorrada.
Hal-abuurnimo iyo daacadnimo ayaa mabda 'noo ah. La qabsiga iyo dabacsanaanta ayaa ah faa iidadeena. Waxaan hiigsaneynaa inaan metelno Made in China qeybta matoorrada korantada adduunka oo dhan. Ku dhaji fikradda ah "in macaamiisha loola dhaqmo si sharaf leh oo aad suuqa ugu guuleysato si tayo leh" iyo in lala kulmo baahida joogtada ah ee macaamiisha guriga iyo aborad, anaga waxay u heellan yihiin sameynta sumadda "Leadrive motor" oo u ogeysiiso Shiinaha sidoo kale adduunka. Anaga oo daacadnimo iyo caqli leenahay, waxaan rajeyneynaa mustaqbal ifaya oo wadajira kula jooga.
Beerta Warshadaha ee Shangsiqian, Luoyang, Luqiao, Taizhou Zhejiang China